custom RFID ပရင့်ထုတ်ရန်အ Flexible သတ္တုကိုခံနိုင်ရည်စတစ်ကာ, RFID ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဆန့်ကျင်သတ္တုတံဆိပ်တပ်ရန်
 » RFID ဆကျကပျ Tag ကို » anti-သတ္တု Tag ကို » ပရင့်ထုတ်ရန်အ Anti-သတ္တုတံဆိပ်တပ်ရန်
ပရင့်ထုတ်ရန်အ Anti-သတ္တုတံဆိပ်တပ်ရန် Custom RFID Printable Flexible Anti-Metal Sticker, Custom RFID Printable Flexible Metal Resistant Label, custom RFID ပရင့်ထုတ်ရန်အ Flexible သတ္တုကိုခံနိုင်ရည်စတစ်ကာ, RFID ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဆန့်ကျင်သတ္တုတံဆိပ်တပ်ရန်, RFID Asset Management Anti-metal Sticker, RFID Asset Management Metal Resistant Label
chip: HF / လှိုင်းနှုန်းသည် UHF optional ကို
protocol စံ: ISO ကို 14443 Type A / က ISO 15693 / က ISO 18000-6C
R / W ကိုအချိန်: 0.1ဒေါ်
induction အကွာအဝေး: HF–5~ 10cm, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF–1~6မီတာ
ဒေတာကိုသိုလှောင်မှု: 10 နှစ်ပေါင်း
ထုပ်ပိုးပစ္စည်း: ကြေးနီစက္ကူ, သတ္တုခံနိုင်ရည်
ရှင်းလင်းဘဝ: 100,000 ကြိမ်
တံဆိပ်အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -25℃ ~ + 75 ℃
တံဆိပ်သိုလှောင်မှုအပူချိန်: 0℃ ~ + 25 ℃
စက္ကူ core ကို၏အချင်းအတွင်းပိုင်း: 76.2မီလီမီတာ(3လက်မ);
တစ်ခုချင်းစီကိုလိပ်အရေအတွက်: 500~ 1000pcs(အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ);
roll ဦးတည်ချက်: အဆိုပါမျက်နှာပြင်သို့မဟုတ်ပုံနှိပ်ထုတ်ရင်ဆိုင်နေရ (အပေါ်);
ထုပ်ပိုးပစ္စည်း: Antistatic ပုလဲဝါဂွမ်း + ပူဖောင်း pad ပါ + Antistatic အိတ် + အပြင်ဘက်တွင်.
Custom RFID flexible metal tags, performance and parameters depend on tag size, ချစ်ပ်အမျိုးအစား, စာဖတ်စွမ်းအား, usage environment, စသည်တို့ကို.
It can pre-write data to the chip contents according to the application requirements, and can be made into white labels to facilitate your printing. It can also pre-print labels: logos, barcodes, variable QR codes, အမှတ်စဉ်နံပါတ်များကို, and various ink printing.
I am interested in your product Custom RFID Printable Flexible Metal Resistant Sticker, RFID ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဆန့်ကျင်သတ္တုတံဆိပ်တပ်ရန်
နောက်တစ်ခု: ultra-ပါးလွှာစတစ်ကာများ Anti-သတ္တုလှိုင်းနှုန်းသည် UHF Tag ကို, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပရင့်ထုတ်ရန်အ Anti-သတ္တုလှိုင်းနှုန်းသည် UHF စတစ်ကာများ Tag ကို, ပရင့်ထုတ်ရန်အ Anti-သတ္တုတံဆိပ်တပ်ရန်